Bayern Munich 2-1 Mainz: Musiala oo guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda Bayern | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Bayern Munich 2-1 Mainz: Musiala oo guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda...
Bayern Munich 2-1 Mainz: Musiala oo guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda Bayern
Julian Nagelsmann ayaa badiyay kulankiisii ​​100-aad ee Bundesliga iyadoo Jamal Musiala uu dhaliyay gool soo laabasho ah oo ay 2-1 kaga badiyeen Mainz.
Bayern ayaa dhibaato ka soo gaartay guushoodii Champions League ee ay ka badiyeen Barcelona, iyadoo ay ka maqan yihiin dhowr ciyaaryahan oo muhiim ah – waxay ka maqnaa qaab ciyaareedkii fiicnaa kulankooda maanta.
Mainz ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 22aad – Onisiwo ayaa madax ku dhaliyay kubad uu soo karoosay Jonathan Burkardt lakin waxaa goolkaasi ka bar-bareeyay qeybta labaad ee ciyaarta Kingsley Coman isagoo taabasho ku dhameestiray kubad loo dhigay ciyaarta oo socota 53 Daqiiqo.
kooxda heysata horyaalka ayaa ugu dambeyntii lahaa tayo aad u badan, iyadoo Musiala, uu ku ciyaarayay door khadka dhexe ah oo aan horay looga baran, isagoo dhaliyay goolka guusha daqiiqadii 74-aad ee ciyaarta guud ahaan kulankan ayaa ku soo idlaatay 2-1.
Natiijo ahaan Bayern ayaa leh 37 dhibcood waxana ku soo xigta Dortmund oo leh 31 Dhibcood.
Bayern ayaa u safri doonta Stuttgart talaadada, kulankooda ugu dambeeya ee 2021. Mainz, ayaa dhanka kale martigelin doonta Hertha Berlin.
Barcelona oo doonaysa in ay Liverpool kala wareegto Roberto Firmino
Liverpool oo xiiseyneysa saxiixa Kalvin Phillips
Manchester City oo soo bandhigtay xiisaha ay u qabto Rafael Leao.
Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid: Benzema iyo Modric oo los blancos ka Caawiyay Koobka Supercopa
Real Madrid oo ku dooneysaa 46 milyan ginni Eduardo Camavinga.
Real Madrid oo Dusan Vlahovic u aragta badalka Erling Braut Haaland
Hub aruursiga mucaaradka, furamaha cusub ee ay dageen iyo ciidanka uu...
FIYE22, KHADIJO DIRIYE VS ENG ABTI DOON HORUDHAC GOOR DHOW...
Deg Deg Rooble oo digniin culus kasoo saaray kiiska Ikraan Tahliil...
Barcelona oo go’aansatay inay la soo wareegto Matthijs de Ligt xagaagan.
Wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa MUQDISHO + Sawirro
Cumar Filish oo ballan ku saabsan doorashada u sameeyey guddoomiye Cirro
Wararka Suuqa Caawa: Anthony Martial, Jesse Lingard, Omar Rekik, Gabriel Jesus,...